DAAWO+Akhriso: Muuse Biixi oo Eryay Wakiiladii ugu Badnaa iyo Kuwa uu magacaabay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
DAAWO+Akhriso: Muuse Biixi oo Eryay Wakiiladii ugu Badnaa iyo Kuwa uu magacaabay
Nov 6, 2019 - 17 Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale ) Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa Eryay inta badan wakiiladii Somaliland u fadhiyay dalalka dibeda, isagoona kuwo cusubna u magacaabay xilalkaasi, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada Somaliland.
Wakiilada uu maanta caydhiyay Madaxweyne Muuse Biixi ayaa waxa loo aaneynaya kadib markii uu gaabis weyn uu ku yimid ololihii aqoonsi u helida Somaliland, kaasi oo ay dalalka caalamka kaga baadi goobeysay Ictiraaf.
Ku: Maxamuud Cabdi Dacar, Wakiilkii hore ee Somaliland ee Midowga Yurub
Ku: Ayaan Maxamuud Maxamed, Wakiilkii hore ee Somaliland ee Dalka Boqortooyada Ingiriiska
Ku: Sulub Warsame Xuseen, Wakiilkii hore ee Somaliland ee Dalka Norway
Ku: Cabdalla Muuse Axmed, Wakiilkii hore ee Somaliland ee Dalka Boqortooyada Sucuudi Carabiya
Ku: Cali Maxamed Axmed, Wakiilkii hore ee Somaliland ee Dalka Yaman
Og: Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir, Wasiirka Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ah.
Mudanayaal iyo Marwo, Sida aad la socotaan, xilka qaranka ayey dabcigiisa tahay in uu meerto noqdo, oo hadba loo igmado ciddii hanan karta. Sidaa darteed, waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilkii aad u hayseen Qaranka. Waxaan idiinka mahad-celinayaa muddadii aad hayseen xilka Qaran.
1. Cabdi Cabdillaahi Xirsi Maxamed – Wakiilka Somaliland ee Boqortooyada Ingiriiska
2. Salaan Xasan Kayd Cabdille – Wakiilka Somaliland ee Midowga Yurub
3. Yuusuf Maxamed Guuleed Boodhle – Wakiilka Somaliland ee Dalka Itoobiya
4. Maxamed Maxamuud Aadan Samatar – Wakiilka Somaliland ee Dalka Norway
5. Axmed Jaamac Xasan Shire – Wakiilka Somaliland ee Dalka Koonfur Afrika
6. Mustafe Yuusuf Ismaaciil Cali – Wakiilka Somaliland ee Dalka Jarmalka
7. Cali Axmed Cismaan – Wakiilka Somaliland ee Dalka Sucuudi Carabiya
8. Axmed Cali Salaad Maxamed – Wakiilka Somaliland ee Dalka Yaman
9. Barkhad Maxamuud Kaariye Samatar – Wakiil Ku-xigeenka Somaliland ee Dalka Itoobiya
Muse Biixi haybad madaxwynenimo ayaa ka muuqata.
War ninkaas halala shaqeeyo.
Buuq iyo is jiidjiid xagee lagu gaarin ama dagaal.
Garxajis toogadiina sugta.
Waa dhaqanka Harti Daarood in
Kuwa Xamar biilka ka qaato AMAANAN MADAXWEYNAHA VILLA HARGEYSA iyo Caasimadda Labaad ee Hargeysa
Wuwa Hargeysa Biilka ka qaatana AMAANAAN
MADAXWEYNAHA VILLA XAMAR iyo Caasimadda 1aad ee Muqdisho.
– Sidoo kale waa Caado inuu DOOLIGU/JIIRKU KU XAARO JUUNIGA UU BARIISKA KA CUNAY.
* Governor Galeyr ayaa dhahay Harka Caasimadaha hanaga Saarina.
Hawiye waa Habar-Gidir
Isaaqna Waa Garxajis
Dhulna waa Ciid/caro
Ictiraaf raadinta isaaqa u ekaa nabad iyo nolol oo awood karaadisa askarta shisheeye si eey uga adkadan qofkasta oo fikir kudiidan ictiraafku waa dadkaaga oo aad hambal unoqoto musuqana kala dagaalanto.
Ictiraafkii ma Wakiil qabiil buu ku soo dhamaaday kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Alla maxaa dumar iyo ciyaal badan la khalday ictiraafka daaqada saaran . Sheekadaas waa soo dhamaatay hada .
Dhamaan isaaqa aadaya waxbarasho ama Ganacsi waxay ku safran Passport ka dalkeena Somaliya .
Madaama aan Partnership ka ahay Gaadiidka
Iskaga goosha Gobolada Puntland iyo Waqooyi Galbeed Somaliya (Hargeisa ) iyo Togdheer , waxaan arka Gabdho badan oo isaaq ah una socda Garoowe si Passport-ka u qaataan . Waliba Fursada aan ka Faideystay oo Gabadh baan ka Guursaday kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Cawaankii Denni oo Caawa weeraray xaruntii Baarlamaanka , Garoowe Caawa waxay la ciirciifeysa Maleeshiyaad Hubeysan ka dib markii kooxdii aaranjaan la Jabiyey . Denni saacadaha soo socda Garoowe waa laga saaraya si xoog ah , waxaana la wareegaya xukunka Ahmed Karaash . Afarta sano soo socda madaxweynaha waa Karaash , kuxigeenkiisuna Waa Asad Diyaano .
Bye bye Denni
Faroole baa Yaabay
Axmed karaash hadduu tabar leeyahay ha xoreeyo laascaanood!! hadduusan awoodin hadalku waa ka xiran yahay! meesha waxaa ka muuqda faragelin iyo khalkhal gelin ka imaanaysa villa somalia, karaash iyo dhoobo xoogaa baa jeebka loogu shuba, waxaa la siiyey lacag ay u baahan yihiin reer baladweyne!!
Wararkii u dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Garoowe ayaa xaqiijinaya dhimashada hal askari oo katirsan ciidamada Ammaanka, Dhaawac sadex qof oo labo kamid ah ay shacab yihiin oo waxyeelo kasoo gaartay dagaalka kadhacay xarunta baarlamaanka Puntland.
Waxaana soo xaqiijiyey wariye ku sugan goobta Cafimaadka oo booqday goobaha caafimaadka Ee magaalada Garoowe ayaa xaqiijiyey Dhaawac sadexda qof iyo dhimashada halka Askari, waxaana muuqata in ay talaabadan ka dhigan tahay ficilo aan wanaagsaneyn.
Cidda gacanta ku haysa xarunta baarlamaanka Ayaa warar is khilaafsan ka soo baxayaan, Waxaana wararka qaarkood sheegayaan in ay si Difaaceen ilaalada baarlamaanka oo diiday in laga qabsado xarunta.
Sidaas oo kale, dad goobjoogayaal ah oo ku Dhaw xaafadaha xarunta baarlamaanka Puntland ayaa sheegaya in luuqyada xarunta ku dhaw ay ku jiraan dad dhaawac ah, iyadoo aan la awoodin in gurmad loo fidiyo.
Majiraan war kasoo baxay xagga Xukuumadda iyo guddoonka baarlamaanka Puntland, balse Warar madax banaan ayaa sheegaya in Weerarkan lagu qaaday xarunta baarlamaanka Uu ahaa mid ka yimi saacad kahor shir usoo Dhamaaday Madaxweynaha Puntland iyo qaar Mamid ah golihiisa wasiiradda.
Hadii mar kale Denni soo weeraro xarunta Baarlamaanka oo ay joogaan maleeshiyad Hubeysan, Ahmed Karaash wuxuu diyaar u yahay isna inuu Weeraro Guriga Denni . Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Madaama Denni iyo Karaash wada Degan yihiin madaxtooyada , midba midka kale ayuu iska eegaya lkn weerarku waxay sheegayaan in Ahmed Karaash ka maleeshiyad iyo Tikno badan yahay Denni Taas oo sababeysa in Denni Garoowe laga baacsado saacado kooban.
Habartii aan uusan jirin ee uusatee meelo khatara iska gubtay caawa siciid deni maku haysaan hhhhhhhh habeenaan
Mid reer Laascanood qoray qoraalkaas walahay waan qoslay . Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Waar inaadeer meynaga hubtaa?
Waxanoo xikmad ah xageed ka keentay?
Meeshii Garoowe ma Dhuloos ayaa inqilaabay.
Sow tan dhabayacada laga badiyey inqilaab.
Daanyeer Geelwas ah, inta dhulkaakii Iidoor kaa soo raray ayaa mooday in Garoowe leedahay.
Marti kugu raagtay, way ilowdaa in marti ahayd.
Garoowe 40% Dhulbahante ayaa dega.
Dhulbahante ma inqilaabine miskiinka warsangeli ee aad u awood sheeganeysaan tolkiisa idin baacsadey,walaahi warsangeli
Waa rag,geesiyaal reer ayeeyahasy.
Nejiskiiseynta lahaa ee LOP haduu dhuusamareeb sii ordayo aan qaxwadeyda iska cabo.
Caawa maxaa dhantan..kkkkkkk
Sxb Puntland iyo Garoowe Somali oo dhan lagama xigo, laakiin waan u talin ama inqilaabin..kkkkkkkk
Taas waa sheeko kale.
Meesha sowdinkii lahaa dowlad baa kajirta wamaxay cidamada ninba gaarka uhaystaa waar meshan puntland waa siduu faysal cali waraabe shegayay ayaaba runa waxba meesha kamajiraan hawiyahaa lawalaa
War criminal Muuse handaraab waa nin keligiisa qayliya oo iska mirqaansan.
Tallaaban waxay markhaati ka tahay inay ka taallo oo uu ku sigan hayo inuu Muqdisho iska tago.
Muuse runta shalay lo sheegay Hadi u in uun caqli leyahay waxbu ku qaadan
Muuqaal: Wasiirka arimaha Gudaha ee Jabuuti oo si adag Shacabka ula hadlay
- Jun 5, 2020
Hargeisa ( Kalshaale ) Wasiirka arimaha gudaha ee dalka Jabuuti ayaa u Hanjabay Shacabka ...